Munamato wekuti afunge nezvangu. ? Masikati neusiku [uye Kudzoka]
Munamato wekufunga nezvangu. Isu tinorarama nerevo yekuda kunzwa kuda uye kudiwa, izvi ndizvo, kusvika pamwero wakati, zvakajairika. Iko kutya kwekurambwa kwakawedzera basa izvo uye isu tinowanzozviwana tiri mukutsvaga kwevamwe munamato saka funga nezvangu Masikati neusiku, dzoka undifonere.
Izvi zvinoratidzika sechipiyaniso chakanyanya kuda asi hapana chimwe chinobva pane chaicho.
Minamato ndicho chombo chedu chakasimba kwazvo pakunamata, saka hatifanire kuzvikanganwa uye nekuchishandisa nguva yese yatinosangana chero chinodiwa, zvisinei nekuti chakakura sei.
Munamato uchagara uri mhinduro uye izvi zvinoshanda kunharaunda dzese dzehupenyu hwedu.
Kune akakosha marumbo ezvinhu zvese uye kune iyi nyaya iyi zvakare yakaenzana inoshanda uye ine simba kupfuura vamwe.
1 Munamato waunofunga nezvangu uchashanda here?
1.1 Namata kuna Rufu Rutsvene kuti ndifunge
1.2 Munamato wekuti ufunge nezvangu izvozvi
1.3 Munamato wekunditsvaga neshungu
1.4 Munamato wekufunga nezvangu udzoke
Munamato waunofunga nezvangu uchashanda here?
Mitsara yose yakaiswa mune ino chinyorwa yakaedzwa uye vane mazana eufakazi hwebudiriro.
Ivo vese vane masimba kwazvo uye vane masimba anoshamisa.
Kana iwe ukanyengetera vese vanekutenda kukuru uye kana iwe uri kushaya, unogona kuva nechokwadi chekuti ivo vachashanda.
Mwari nevamwe vatsvene batsirai avo vanonyatsoda. Kana iwe uri mukuda ingokumbira rubatsiro kuna Mwari.
Ichaita kuti ufunge nezvako, iite kuti iwe uve nerudo, utsvake uye uore mwoyo, zuva rese, masikati neusiku, nguva dzese.
Namata kuna Rufu Rutsvene kuti ndifunge
Subira kuna (taura zita remunhu wacho) kune manzwiro angu uye muviri wangu, pfungwa dzemuviri pamwe nemweya wemunhu iyeye, huya kwandiri Usiku nemasikati zvisinei nemamiriro ezvinhu iwe aungave uri parutivi rwangu.
Ini ndinokubvunza iwe, muzita reSanta Muerte Lady ndinokumbira iwe undipe simba uye kutonga kwakazara, kuti uve nemunhu iyeye parutivi rwangu, ndinokukumbira kuti ugare uchinditarisira, uye usazombomira kuzadzisa zvese izvo zvandinokumbira kwauri.
Kusvikira iwe waakuda, ndinokukumbira kuti undiendese kuhupo hwako. Ini ndinokudana, usambondisiya uye ndinokumbira kuti usanditeerere.
Kuita kuti rudo rufunge nezvangu chimwe chinhu chakatiomera.
Ndokusaka tichifanira kunyengetera kune mumwe munhu akasimba uye aine masimba mazhinji murudo.
Santa Muerte ndiyo yakakodzera chisungo kuzviita
Munamato wekuti ufunge nezvangu izvozvi
Ini ndinouya kwauri kuitira kuti usunungure moyo wangu uye upore maronda angu.Iwe wanga uri padyo nepamusoro soro uye uchizivisa rudo rwe nyika Ndinokukumbira kuti undireverere, ndinokumbira rubatsiro rwako netsitsi Ah Mutumwa wangu mukuru!
Ndibatsire kupedza nzara yangu yerudo, ndibatsireiwo kuti ndiumbe zvisungo zvemoyo uye chaicho .. Gadzira (taura zita remudiwa) uswedere kwandiri nemeso erudo chairwo.
Teerera kune zvinokumbirwa nemoyo wangu uye usandisiya muArchist yekumirira yerudo, muchinda wedenga.
Iwe unofanirwa nerudo rweWekumusoro-soro, tsvaga rugare mumoyo mangu Ndizorodze nekugutsikana kwekufara nemunhu uyu wandadanana naye.Ndinoziva kuti kunaka kwako kuchabata moyo wako uuye kwandiri, semuranda waMwari kuti tese tiri vaviri , uchaita chishamiso.
rudo rwako ndirwo infinito ngirozi yangu huru, ukuru hwenyu hunondizadza uye kuonga kwangu kunogara nekusingaperi Bata moyo wake uye iwe uchapodza yangu munguva pfupi.
Runako ngaruve neni uye rudo rwako ngaruve pamwe nenyika, Ameni!
Muchiitiko ichi, tichaona mhedzisiro yemunamato nekukasira kana tisingakwanise kuzvisimbisa uye ichi ndicho chinhu chine simba pamusoro pemunamato uyu, unotikumbira kuti titende kuti chishamiso chakaitwa kunyangwe isu tisingaone iwo mhedzisiro yacho pachayo.
Vamwe vanobata dzidziso yekuti namata kana kubvunza uine chinangwa chekugona zvishuvo kana pfungwa yevamwe vanhu chiito cheudyire pane isu, asi vamwe vanotenda kuti ichi chiitiko cherudo uye kuti pane maonero akawanda.
Semuenzaniso mune izvo zviitiko apo kudada kwakadudzira uye kubvumira munhu asiri ruoko rwake kuti ashatise, ipapo mumwe weminyengetero uyu une simba kuti mudiwa wangu afunge nezvangu unokwanisa kubatsira zvakanyanya, asi hazvireve kuti tinenge tichikuvadza kune wese munhu uye ipapo nemunamato tichaedza kuita bhurawu uye nhoroondo itsva.
Icho chinangwa ndechekugadzira iyo inoda nzira yekuitika, kwete yekukotama mumwe wacho kusarudza uye kuita zvandinoda.
Munamato wekunditsvaga neshungu
“Nditsvage izvozvi, panguva ino chaiyo (iwe unotaura zita remunhu wacho) ndinoda kuti unditsvage, kubva pese paunenge uripo.
Ishe, kubva panguva ino ndinokukumbira iwe (zita remunhu) isa pfungwa dzako chete pandiri, kuti ini handigoni kufunga nezve chimwe chinhu kunze kwangu, kuti kusangana kwako kwakangoitirwa ini.
Kuti nenzira iyi iwe unonzwisisa kuti iwe unondida muhupenyu hwako uye kuti haufanirwe kupedza rimwe zuva pasina rudo rwangu. Ita iyi nguva (zita remunhu) kanganwa kudada kwako, ndifone, nditsvake zvakanyanya uye ndinoda kuva neni parutivi rwako kwemamwe mazuva ako.
Nesimba raMwari, ndinoshevedza vatumwa vake vatatu. MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, zvekuti vakaisa maoko pa (zita remunhu) uye havagone kuwana chechipiri mupfungwa dzavo.
Mwoyo wake, muviri, mweya nemweya ndezvangu chete uye zviri kwandiri chete, kuti anongofunga nezvangu uye anondishuvira, kuti atsause avo vese vanoshuva kuita zvakaipa nechinangwa.
Muzita raJesu, ameni.
Munamato unoshanda kune zvese zvido zvatingave nazvo sevanhu uye kunzwa kuda kusvika padanho rekushomeka ndiko, kazhinji, kudiwa kwatinoyedza kugutsa nguva dzese.
Namata kukumbira kuti mumwe munhu, iyezvino murume nemukadzi, kana mumwe ex achangondisiya, anzwe sekutsvaga kwedu ndiyo nzira inobatsira yekutsamwisa.
Iyo inonyanya kukurudzirwa namatira kuti utsvake munhu iyeye uye uzviratidze pakurambwa kunorwadza.
Minamato inogona kuve yakanyanya kudarika mazwi, zvese zviri mukutenda izvo zvatinoita minamato yedu.
Munamato wekufunga nezvangu udzoke
“Mune simba guru raMwari, ndinokumbira mweya wekusuwa, mweya wekutonga, usina kugadzikana.
Ini ndinokumbira kuti mundibatsire kutonga (zita remunhu) uye kudzora manzwi avo mashanu, kuti nenzira iyi handigone kubuda mupfungwa dzavo kechipiri.
Ini ndinokukumbirisa, kuti uve mutungamiriri wangu munzira ino yandiri kuda kufamba, kuti (zita remunhu) ndewangu chete, kuti ubve kure nevaya vese vanoshuva kusvika nemaonero anodarika ushamwari kana ivo vanoshuva Mubvisei kwandiri
Ini ndinokukumbirisa, kuti uve iwe zano chete masikati nousiku, kuti iwe utsvake kunditsvaga uye uve parutivi rwangu.
Muzita renyu, mweya mukuru. Ameni.
Kukumbira rubatsiro rwemweya kuti uwane kudzoserwa kwemumwe munhu akatisiyira tsika yave ichienderera mberi kwemakore akawanda.
Vanomudana la munamato wekusuwa uye ine simba kudarika zvaunofungidzira.
Iyi minamato inogona kuitwa chero nguva yezuva, izvo zvaunofanirwa kuchengeta mupfungwa ndizvo chaizvo zvauri kuda.
Sezvo munamato uchifanira kuitwa nemazano akajeka kuti tirege kukumbira chinhu chatisinganyatsoda zvachose.
Vanhu vazhinji havazivi kana vachigona kunyengetera kanopfuura kamwe munamato. Mune ino kesi, tinogona kuti hongu.
Namata minamato yose yaunoda, asi ingoite chete nemazuva akasiyana.
Usambofa wakanamatira munamato nechinangwa chimwe chete zuva rimwe chete.
Edza kusiya nzvimbo yezuva 1 pakati pemunamato wega wega kuti afunge nezvangu uye andirote zuva rese uye ikozvino.
Kutenda ndicho chinhu chakakosha pane zvese muminamato. Kana iwe uine kutenda uye uchigara uchinamata kuti utende kuti zvese zvinopa nzira, minamato yese ichashanda.